EUPHORBIA AMA EUPHORBIA: SHARAXAADDA NOOCYADA CAANKA AH (SAWIRKA IYO MAGACA) - SOOSAARKA DALAGGA
Noocyada Caanwaanka: sawirada iyo magacyada noocyada waaweyn
Spurge - marti ka yimid tropics, laakiin maanta warshad this adrens suuqyada caadiga ah beerta, dhismayaasha xafiiska, xafiisyada iyo guryaha. Warshadu waxay leedahay in ka badan hal kun iyo badh nooc oo ah noocyada kala duwan ee caanaha iyo qaabka caleemaha iyo ubaxa, joogitaanka ama maqnaanshaha qodaxda. Maanta waxaan fahamnaa sida noocyada kala duwan ee euphoria qolka, eeg sawirrada, raadi magacyadooda saxda ah, si kooban u falanqee xujadaada iyaga daryeela.
Cadaan-cad (Euphorbia leuconeura)
Belozhilchaty geedka this, caan ah ee dhaqanka ee dhirta daaqadda, waxaa loogu yeeraa garab cad oo ku saabsan asalka cagaaran casriga ah ee caleemaha iyo geesaha jir. Midabka cad wuxuu ku xiran yahay diirada cabitaanka caanaha. Dhirta yaryar waa rosette yaryar oo caleemo cagaaran oo waaweyn oo cagaaran, ballaaran oo ku wareegsan cidhifyada, cufnaanta taabashada, dusha dhalaalaya.
Spurge, sida cactus, sansevieriya, hibiscus, spathiphyllum, zamiokulkas, geedkii kirismaska, chlorophytum, macmiilka, ayaa lagu tilmaamay inay yihiin maadooyinka aan qabin. Waxay awoodaan inay abuuraan raaxada guriga iyada oo aan la bixin kharashyada daryeelka gaarka ah.
Dhirta qaangaarka ah, sida ay koreyso, waxay sameeyaan stem pentahedral ah oo qoyan oo saldhig u ah salka, iyo da'da ixtiraamka ah ee laga yaabo inay soo baxdo, sameysaan qaabab aan caadi ahayn, sida midabada. Waqtiga ubax ee axsaabta caleemaha waxay u muuqanayaan caleemo aan khafiif ahayn, ubax yar yar oo cadaan ah, oo u eg sida nalalka dhalaalaya. In kudheeraha peduncle, waxaa jira miraha in ay toogtaan afar mitir u jirta geedka. Euphorbia belozhilchaty uma baahna daryeel gaar ah iyo fiiro gaar ah guriga, si kastaba ha ahaatee waxaa jira xeerar yar:
waraabinta - sida ciidda u engegay, mar dambe; ku buufintu waa lagama maarmaan inta lagu jiro xilliga kulul;
iftiin - cilad, laakiin aan ku jirin qorraxda tooska ah;
Heerkulka - heerkulka qolka, 18-23 ° S;
qoyaanka hawadu waa dhexdhexaad;
Awoodda maadada waa ka ballaaran tahay qoto dheer;
ka kooban ee ciidda aan qabyo ahayn, transplantation ee shaybaarka dhalinyarada - sanadkiiba; dadka waaweyn ee ka weyn shan sano - labadii sanaba mar.
Waa muhiim! Soodhaha caanaha ah ee dhirta waa sun, markaad la shaqeyneyso, waxaa lagugula talinayaa inaad ilaaliso maqaarka iyo indhaha indhaha si looga fogaado gubasho daran.
Bluish (Euphorbia coerulescens)
Mugdiga Euphorbia waxaa magaciisa la soo gaabiyey sababtoo ah caleenta cagaaran ee dhinaca cagaarka. Noocyada nooca nooca "euphorbia" waxay ku dhufan karaan vegetatively, sidaa daraadeed waxay si dhakhso ah u koraayaan, qabashada aag ballaaran. Geedka dhirta waa mid qaro weyn, illaa 50 mm wareegga wareegga, wuxuu leeyahay afar ilaa lix wajood oo leh waji dhexdhexaad ah oo tubercular ku yaal geesaha. Halkii caleemo suubin ah, qodax madow oo madow oo la gashado qaab gees ah, badanaa ayaa sidoo kale lagu daboolay ubax. Isugeyn xoog leh oo ka badan hal mitir oo dherer ah.
Succulents waa dhir aan u baahnayn waraabin joogto ah. Intaa waxaa dheer in dhirta suunka ah ee caanaha lagu iibiyo sidoo kale waxaa ka mid ah aichrizone, echeveria, agave, aloe, echinocactus, nolin, slipway, kalanchoe, iyo cinquefoil.
Noocyadaas waxay jecel yihiin penumbra iyo waraabin dhexdhexaad ah, waa la karin karaa keliya xagaaga. Inta lagu jiro xilliga nasashada, wuxuu u baahan yahay qaboojin, laakiin aan ka yareyn +12, waraabinta muddadan ayaa joojisa.
Euphorbia meloniform wuxuu leeyahay qaab isku dhafan, ilaa 10 cm oo dherer ah, wuxuu koraa width ilaa 5 illaa 10 cm.Markii ay sii weynaato, waxaa ku baxda carruur badan oo u dhow saldhigga. Nidaamka dhirirka qarxa ee wareegsan ayaa leh saddex geesood oo qaabeeya - laga bilaabo siddeed ilaa laba iyo toban. Midabku wuxuu noqon karaa mid cagaaran, cagaaran, cagaar iftiin ah iyo midab buluug ah. Furka waxaa lagu daboolaa qaabab casere ah, oo wejiyana badanaa waxaa lagu qurxiyaa maro farabadan oo ah midab madow, midab madow ama midab leh. Qeybta sare (inta badan dheddigga) dhirta adag oo leh cagaar cagaaran ama huruud ah oo yar yar ayaa la sameeyaa.
Euphorbia qolka qolka wuxuu jecel yahay qoyaan dhexdhexaad ah, dabacsan, dabiici ah iyo nafaqo leh oo dheecaan leh.
Waa muhiim! Xilliga jiilaalka, dhirta aan la waraabin, marar dhif ah, kubad ciid ah ayaa la buufiyaa wax yar.
Dufanka ama dufanka (Euphorbia obesa)
Waxaa jira qaar ka mid ah noocyada noocan oo kale ah noocyada kor lagu sharaxay: stem qaro ayaa leh qaab wareegsan, sidoo kale waa yar yahay - ilaa 12 cm dheer iyo 8 cm wareegga. Jirka ayaa sidoo kale loo qaybiyaa qaybo, inkastoo aan sidaas loo qeexin iyo feeraha oo kooban. Farqiga ayaa ku jira maqnaanshaha dhirta geedka. Midabka euphoriya waa baruur - cagaar-cagaaran ama cagaar madow, oo leh dhar madow. Duufaannada keli ah, oo lagu ururiyey farabadan sare ee jir-ka. Euphorbia obese jecel yahay dheriyo qoto dheer, waraabinta dhexdhexaad ah sida ciidda u engegan. Xilliga jiilaalka, dhirta waa nasasho.
Canary (canaryenis Euphorbia)
Marka loo eego xaaladaha dabiiciga ah, baadiyaha baadiyaha ah waxay gaaraan saddex illaa afar mitir oo dherer ah; guriga, dabcan, aad u yar. Suurtoorkan wuxuu leeyahay xariijimo fejigno ah oo afar ama shan waji leh, oo leh geeso cad, oo aan lahayn caleenta. Furka waxaa lagu ilaaliyaa jeexjeexyada laba-geesoodka ah ee ka soo baxa qaabab nus-centimitir ah qaababka kelyaha-qaabeeya. Wuxuu u baahan yahay manjooyin, nadaafad iyo muuqaal. Sanadle ah, waa inaad jarjartaa dusha iyo ka saar caleemaha daciifka ah ama qaldan - sidaas darteed waxaad siin doontaa qaab qurux badan oo bogsiinaya, dib u soo kabashada baadiyaha.
Cudurka Euphorbia waa warshad caleen, oo la mid ah juniper. Waxay si weyn u korodhay xaaladaha dabiiciga ah waxayna qaadataa qaab daaqsinka ah. Xaaladaha qolka, dhererkoodu kama badan karo nus mitir. Waxay leedahay toosan afkoda, cufan daboolay cirbadda sida, caleemaha cagaaran dhalaalaya. Inta lagu jiro muddada ubax, tufts cufan ee inflorescences waxaa lagu sameeyay on dushooda of afkoda. Ubaxyo yaryar oo caws dhaadheer ayaa ku wareegsan xirmooyinka quruxda badan ee midab guduudan ama dahab ah.
Noocani waa abaarta u adkaysata waxayna si fiican u dulqaadaneysaa qulqulka marka la barbar dhigo. Gaajada, dhalaalaya dhalaalaya, wuxuu u baahan yahay iftiin dhalaalaya ugu yaraan toban saacadood maalintii. Cunto geedka marmar sanadkii hal mar leh macdanta macdanta ah ee adag.
Xiddiga weyn (Euphorbia clavigera)
Noocaan waxaa loogu yeeraa xidid weyn sababtoo ah jirid la bedelay, oo la mid ah geedi-socodka xididada ee ka soo baxa ciidda. Laga soo bilaabo lignified, shuban qaabaysan oo aan joogto ahayn, caleemaha cagaaran iftiinka koraan, loo qaybiyo qaybo, oo leh qalab dheer oo labajibbaaraya qarkiisa geeska geesaha fiiqan. At dushooda ee caleemaha ee grooves u dhexeeya qodaxda yihiin buro budo-inflorescences. Jaalaha ah, ubaxyo qaab ah oo leh saddex illaa afar stamens dheer ka dhigo habka ay ka soo burooyinkeeda. Warshadani waxay inta badan ku koraan bonsai. Wuxuu u baahan yahay iftiin dhalaalaya, heerkulku wuxuu ka jiraa 22 ilaa 26 ° C, haddii kale daryeelku wuxuu la mid yahay kan kale ee succulents.
Ma taqaanaa? Magaca Euphorbia euphorbia waxaa lagu xusay Qoraalka Pliny. In uu "taariikhda dabiiciga ah", wuxuu qeexayaa xaalad mucjiso ah oo ka soo kabasho cudur daran oo ka soo jeeda taliyihii Numibiya. Si loo sii wado magaca Euphorbos ee dhakhtarkiisa ku badbaadiyey isaga, King Juba ayaa magaciisa ku qoray magaciisa oo uu dhakhtarku diyaariyay daawada nafaha lagu badbaadinayo.
Gobo weyn (geeska Euphorbia)
Madaarka Krupnorogogo euphorbia Trigeminal waxaa ka mid ah wejiyadoodu waxay xoqan yihiin gudaha. Waxay u qaybsan tahay qaybaha qaab aan caadi ahayn, qayb kasta oo sare waa sii wadida midda hoose. On cidhifyada aan caddaalad ah ee cidhifyada mid ka mid ah tubercle koraan laba maqaallo eegaya jihooyinka kala duwan. In bay'ada dabiiciga ah, euphorbia Blooms ubaxyo ubax ah oo caleemo qaali ah, ficil ahaan ma aha ubaxsan xaaladaha gudaha. Under xaaladaha wanaagsan - qorraxda iftiin, waraabin dhexdhexaad ah iyo heerkulka qolka - dhirta ay awoodaan inay koraan saqafka.
Euphorbia Mila (Miliusa) waa geed caleen ah, oo intaa dheer, qodax, sidoo kale wuxuu leeyahay caleenta. On jirridda cufan ee cirifka, ku dhow u sare, caleemaha cagaaran casriga ah foomka dhicin-qaabeeya koraan: cidhiidhi at petiole, waxay si siman u ballaariyaan, wareegsan hareeraha gees. Dusha sare ee saxanka xaashida waa mid sahlan oo iftiin leh. Blooming, Euphorbia Mile soo saaro caws ubax dheer, badanaa leh laba ubax oo ah casaan, cad ama huruud ah. Muddada ubax ee geedka wuxuu bilaabmaa marka uu gaaro 25 cm ee dhererka. Guga iyo xagaaga, dhirta u baahan tahay waraabinta dhexdhexaad ah iyo bacarimiso, iyada oo aan ku dhicin waa lagama maarmaan in laga saaro caws ubax la qalajiyey iyo caleemo. Inta lagu jiro xilliga nasashada, heerkulku waa inuusan ka yarayn 12 ° C.
Caanaha (Euphorbia lactea)
Euphorbia caan ah-cagaar ayaa ku kora geedo, foorno cad oo ribbed ah sida ay u koraan oo qoto dheerna u baxda leh caleemaha dhinaca. Faashadaha caleemaha waxaa si cad u qotomiyay tubbo-xajmeed saddex geesood ah oo ku dhamaada dushooda. Waxaa jira mid aad u xiiso leh qaabka dhaqanka qolka qolka "Cristata": oo ka soo gooyay god dheer, oo loo qaybiyay seddex ama afar waji, ubaxyada qaabka furan, daloolo qadka taageerada, sameynta midab caan ah, badanaaba xuduudda casaan ee geeska.
Multifaceted (polygona polio)
Euphoriya badan ayaa loo magacaabaa sabab wanaagsan: jirkeeda wuxuu mararka qaar leeyahay ilaa labaatan geesood. Bushku wuxuu noqon karaa mid ka mid ah astaamaha guud, oo la mid ah muuqaalka kakoobiga, waxana laga yaabaa inuu ka kooban yahay silsilado dhowr ah. Xudduudda feeraha ayaa ah tubberle-brown-brood iyo qodax fiiqan. Burooyinka caleemaha qoyan waxay ku yaalliin barar dhaadheer. Noocyadaasi waxay jecel yihiin in ay ku horumaraan penumbra. Inta lagu jiro xilliga nasashada, waraabinta si fiican uma aha.
Saddex xagal (Euphorbia trigona)
Noocyo dhakhso ah oo sii kordhaya, xaaladaha qolka muddo saddex sano ah waxay kor ugu kacdaa mitir; Sababtoo ah leexashada dhirta, baadiyaha haaban ee iswada leh ayaa la sameeyay. Laakiin sida uu u korayo, wuxuu u baahan doonaa taageero, sababtoo ah nidaamka xididku waa gacmeed, sababtoo ah culeyskiisa, baadiyaha ayaa jebin kara ama ka dheregaya dheriga.
Dhinacyada foosto waa midabyo, dhalaalaya, iftiin cad oo cagaaran. On cidhifyo fiiqan, halkii basbaaska, caleemaha teardrop-koraya koraan leh caarada fiiqan fiiqan iyo xariijin dhexe dhexe ee caleen. Neefta ama nalka qulqulka - dhirta ayaa si siman u kobciya labadaba halkaa iyo halkaa. Wuxuu si fiican uga jawaab celiyaa dharka macdanta.
Cereus (Cudurka Euphorbia)
Neefsashada cereus waa geedo ballaaran oo cufan leh oo leh dhowr faashooyin farabadan. Grey-cagaaran afkoda cidhifyada feeraha waxaa la jarjaray dhoobo waaweyn ilaa 2 cm oo dherer ah, xajmiga cufan iyo cufan. Leaves waxay ku koraan halkan iyo halkaa, hase yeeshee way yar yahiin oo daciif ah in ay isla markiiba qallajiyaan. Qaar ka mid ah isla markiiba way duulaan, qaarna waxay haystaan ​​muddo dheer. Noocaan ka hortagga qorraxda tooska ah, laydhka qorraxdu way sii jiri doonaan weligood. Warshadu waxay jeceshahay in la buufiyo, laakiin waraabinta waa inay ahaato mid kaliya sida ciidda u daadi dusha sare.
Fisher ama Pallas (Euphorbia fischeriana)
Euphorbia Pallas, ama nin-xidid, sidii dadka loogu yeedho, waxay runtii ka caawisaa ragga inay la qabsadaan shaqaaqo jinsi ah. Tani waa geed caleemo qoyan, caleen iyo caleen. Waxay leedahay dhuuban oo dabacsan oo afkoda ah iyo warqado saddex geesood ah oo qaabaysan, oo leh dhar cad oo ku dhow, iyada oo midabkeedu yahay midab cagaaran oo iftiin leh. Inta lagu jiro xilliga ubax on ubucda ubax yaryar jaalaha ah waxaa la aasaasay on peduncles dheer, oo lagu qalabeeyo laba ka mid ah shuruudaha. Kadib markaad qufacdo, miro khudrad ayaa la sameeyaa. Laakiin dhirta caan waa caan. Xakamaynta adag waxay leedahay habab badan oo yaryar, sidaa darteed tiro badan oo dhan waxay u ekaataa qof shakhsi ah. Markaad baraneysid halabuurka xididka waxaa laga helaa walxaha waxyeellada u leh unugyada burooyinka.
Ma taqaanaa? Esoterics waxay soo jeedinaysaa in xasilloonida Pallas ay tahay asalka caanka ah ee mandrake. Sidaad ogtahay, mandragora waxaa loo isticmaalay sida qayb ka mid ah caado dhaqameedka iyo sida daawo awood leh.
Iskujira (Euphorbia Globosa)
Marka ugu horeysa, geedka ayaa u egyahay farshaxanka carruurta ee wax qarsoon. Laga soo bilaabo baradho-sida wareegsan afkoda, kor u kacaya qaab habboon, caleemaha cagaaran ee qaab isku mid ah. On the cawska cagaaran caleemaha waxaa jira caleemo yaryar, iyo dushooda muddada ubax waxaa jira inflorescences cufan on peduncles dheer. Dhammaan Qaybtaas waxay ku koraan ballac illaa nus mitir, oo dhererkoodu ka badan yahay toban sintimitir. Kala duwanaanshuhu wuxuu jecel yahay penumbra, wuxuu si fiican uga jawaabaa quudinta xagaaga, inta lagu jiro xilliga nasashada, waraabinta waa in la tuuraa.
Euphorbia waa warshad ku haboon: haddii aad safar socoto, waxay awoodi doontaa inaad sameyso adiga oo aan fiiro gaar ah lahayn muddo ka badan laba toddobaad, iyo deegaan dabiici ah oo aan roob lahayn - xataa wakhti dheer. Waxaa jira hal "laakiin" oo ku jira nuuca milkweed ee guriga: sida hore loo soo sheegey, dhirta waa sun, sidaas darteed, haddii ay jiraan carruur yaryar oo guriga ku yaal, waxaa fiican inaad iska tuurto.